Horumarinta Shirkada | Beyin xirxirida | warshada boorsada cuntada
Horumarinta Xirmooyinka Beyin
Kazuo Paper iyo Plastic Packing Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 1998 bilowgiisii, waxaana loogu magac daray Xiongxian Shuangli Plastic Co., Ltd, oo inta badan ka ganacsan jiray bacaha tshirt waqtigaas. Intaa ka dib, waxaan dhisnay Beijing Shuangli Shuoda Plastic Co., Ltd. waxaanan sii wadnay ganacsiga 10 sano illaa aan ka dhisnay warshad noo gaar ah ka dibna waxaan aasaasnay ​​Xiongxian Juren Paper Plastic Packing Co., Ltd. sanadkii 2009. Intaana markaan ku guda jirnay, waxaan bixinay boorsooyin loogu talagalay Cayaaraha Olombikada 2008 ee Beijing, taas oo sharaf weyn noo ahayd. Kaliya waxaan diirada saarnay ganacsiga gudaha waqtigaas, ka dib markaa isbedelka, waxaan ogaanay inay jiraan fursado badan oo ka imanaya ganacsiga caalamiga ah, sidaa darteed waxaan go'aansanay inaan ku lug yeelano, ka dib waxaan dejinay waaxdeena ganacsiga caalamiga ah, oo aan kaqeyb qaadanay 116- Carwadii 118-aad ee Kanton, oo lagu gaadhay natiijooyin aad u fiican. Waxaan waxbadan ka ogaanay waxbadanna ka ogaanay ganacsiga caalamiga ah iyo bandhigyo kaladuwan, si aan u balaarino ganacsigeena, waxaan aasaasnay ​​Hebei Ruika Import and Export Trading Co., Ltd.
Waxaan sii wadnay barashada, helitaanka iyo koritaanka, illaa iyo 2017 dowladdeena ay ka hirgelisay Xiong'an New Area halkaas oo ay ku taallay warshaddeena. Kadibna waxaan la kulannay dhibaatadii ugu weyneyd: badbaado ama halaag. Haddii aan rabno inaan sii wadno ganacsigeenna, waxaan u baahanahay inaan u wareejino warshaddeenna meel kale, taasna waxay ku kacaysaa kharash badan, waqti, lacag, dad, iwm. In kasta oo haddii aan joojinno, taasi waxay noqon doontaa habka ugu fudud laakiin sida ugu badan ee mas'uuliyad-darrada ah, ogaadaan sida loo wajihi karo shaqaalaheena, iibka iyo macaamiisheena. Dhibaato dheer kadib, waxaan aakhirkii go'aansanay inaan siiwadno. Nasiib wanaag, saraakiisha ka socota dowladda Liaoning waxay soo jiitaan maalgashi martiqaad ah, waana is helnay, ka dib waxaan u guurnay Gobolka Liaoning, ka dibna waxaan dhisnay warshaddeena cusub, waxaanan aasaasnay ​​shirkad cusub, taas oo ah Kazuo Beiyin Paper iyo Plastic Packing Co., Ltd. Waxaan kaliya nahay qaatay hal sano, hal sano oo kaliya ayaan dhisnay warshaddeena cusub, oo in kabadan 4,000㎡, 7 aqoon isweydaarsi casri ah.
Maaddaama ay yihiin hoggaamiyeyaasha shirkadaha kale ee cusub ee la guuray, saraakiisha maxalliga ah badanaa waxay yimaadaan oo ay soo booqdaan shirkadeena waxayna siiyaan talo soo jeedin sida aan ku heli karno xaalad guuleysi leh. Waxaan ka helnaa taageero aad u badan dowladeena, wax badana waan gudnaa.
Waxaan aaminsanahay inaan ka sii fiicnaan doonno oo ka sii fiicnaan doonno.